Ady gasy - Ody maimbo mandaitra tokoa ve? - L'Hebdo de Madagascar
Nandritra ny 50 taona mahery no nanaovan-dRadimilahy ny odi-maimbo eny amin’ny fasana. Amin’ny fandevenana ihany no mety manao odi-maimbo, Radimilahy satria tsy misy olona misotro toaka, amin’io fotoana io. Tsy manota fady ny zavatra ataony sady tsy mbola nikasika ny molony ny toaka. Rano voahasina alaina eny amin’ny Ekar Katolika no hampiasainy fa tsy mampiasa ravin-kazo na tapa-kazo.
T sy nampoiziny ! Rehefa nahavita ny asamiaramila teo anivon’ny tafika frantsay, Radimilahy dia tafiditra niasa tao amin’ny minisiteran’ny Varotra tetsy Ambohidahy izay nandaniany ny fahatanorany iray manontolo. Tonga taminy ny tsindrimandry rehefa feno enimpolo taona mahery ny lehilahy. Nolovainy avy amin’ny raibeny ny fanaovana odi-maimbo raha ny fitantarany. Enina ambin’ny folo mianadahy no iray tampo ry Radimilahy. Zazalahy fahadimy izy no nahatonga ny anarany. Tsy nampiasa ravinkazo toy ny romba na rambiazana, Radimilahy rehefa handeha hanao ny odi-maimbo. « Soa atao levenam-bola fa ny ratsy atao kosa loza mihantona. Izay no nahatonga ahy hanao io odi-maimbo io. Ny vato aza rehefa nahitana soa hosorana menaka, mainka fa olombelona. Efa maro ihany ny olona tonga teto naka ahy. Raha mbola vitako diantongotra dia mandeha foana aho. Ankehitriny, efa mihaosa aho. Indrindra taorian’ny nivoahako hopitaly vao efatr’andro izay. Alaina sy aterina amin’ny fiara vao mivoaka ny trano. Nisy mony kely izay ka voatery notapahana ny rantsan-tongotro », hoy Radimilahy, mbola tsy afamitsangana eo am-pandriana.
Mpandefa entana any amin’ny sambo no asa niandraiketan-dRadimilahy, fony mpiasan’ny minisiteran’ ny Varotra. Tanànan’i Sainte Marie irery ihany no tsy nodiavin’ny tongony. « Tsy nisaraka tamin’ny rano voahasina aho amin’izay halehako. Niainga tamin’ny zavatra hitako tany ampandehanana no nakako traikefa amin’ny zavatra atao amin’izao fotoana », hoy Radimilahy. Tsy nety tamin-dRadimilahy ny fampiasana ravin-kazo. Niainga teo amin’ny fokontany Antanandrano ny fanaovana odi-maimbo. Ferany dieny mialoha ny tsy hisian’ny olona misotro toaka manakaiky na mikasika ny faty.
« Tsy mety amiko mihitsy raha misy olona misotro toaka fa manota fady ireny. Tonga dia ajanoko raha vao misy olona mamo na maheno fofona toaka manodidina eo. Vao misokatra ny fasana ary tsy miala eo aho raha tsy mikatona ny varavarampasana. Izay no ilaina fifantohana ka raha vao misy ny manelingelina amin’ny toaka dia mikorontana ny zava-drehetra », hoy hatrany Radimilahy, mamerimberina ny tsy fitiavany sy ny maharatsy ny toaka.
Mizara roa miavaka tsara ny asan’ny mpanandro sy ny mpanao odimaimbo. Tsy mifidy andro iasana ny mpanao odimaimbo, ankoatran’ny andro alina. Manonofy roa na telo andro mialoha, Radimilahy rehefa hisy olona ho avy ao aminy. « Tsy mihetsika ato an-trano aho rehefa tonga io fotoana manofy io. Hatreto tsy mbola namitaka ahy na ny endrika amam-bikan’ilay olona na ny fisian’ilay olona rehefa manofy », hoy Radimilahy, manamafy fa mbola mitoetra ao aminy ny talenta amin’ny fanaovana odimaimbo.
Maro ny olona mahafantatra ny talentandRadimilahy. Misy ny fanadihadiana tsotsotra ataony mialohan’ny hivoahan’ny trano. Tsy misy ny tonom-bola fa izay omen’ny tompon-draharaha sady hasin-tànana. «Anjaran’ny olona ny mieritreritra ny vola homeny. Vato aza ve nahitana soa hosorana menaka, mainka fa olombelona. Sady hajao ny ray aman-dreny dia ho maro andro ianao. Tsy miantehitra amin’io asa odi-maimbo io anie aho fa mandray fisotroan-dronono amin’ny maha-mpiasam-panjakana ahy », hoy hatrany Radimilahy, mipetraka ho ray amandreny izay manome torohevitra amin’ny zanaka niara-nitafatafa taminy.
Somary nalahelo, Radimilahy, ny fomba fiteny na fitafy ny ankizy sy tanora ankehitriny. Very ny mahagasy ny gasy. « Tsy hain’ny vazaha anie izany odi-maimbo izany. Tsy ny olon-drehetra no mahay izany kanefa ataon’ny olona tsinontsinona ny kolontsaintsika Malagasy » hoy Radimilahy, namarana ny tafatafa noho ny harerahany vao nivoaka ny hopitaly. Afaka mamaly na antsoina amin’ny laharana 034.87.515.48 na 034.87.515.50 ny lehilahy